China PSA oxygen concentrator / Psa Nitrogen Plant for sale Psa Nitrogen Generator abakhiqizi nabaphakeli | NOMA
PSA oxygen concentrator / Psa Nitrogen Plant iyathengiswa i-Psa Nitrogen Generator
Amandla Oxygen: 3-400Nm3 / h
Ukuhlanzeka Kwe-oksijeni: 93% -95%
Ingcindezi Yokukhipha: 0.1-0.3Mpa (1-3bar) adjustable / 15Mpa Ukugcwalisa ingcindezi okunikezwayo
Okukhiphayo (Nm³ / h)
Ukusetshenziswa kwegesi okusebenzayo (Nm³ / h)
uhlelo lokuhlanza umoya
Oxygen igesi elibalulekile ekusekeleni impilo emhlabeni, ekhethekile esibhedlela, i-oxygen yezokwelapha idlala indima ebaluleke kakhulu ekusindiseni iziguli.
I-ETR PSA Medical Oxygen Plant ingaveza umoya wezinga lempilo ovela emoyeni ngqo. I-ETR Medical Oxygen Plant iqukethe i-Atlas Copco air compressor, i-SMC dryer nezihlungi, isitshalo se-PSA oxygen, amathangi we-buffer, uhlelo lwe-cylinder manifold. IKhabhinethi yokulawula i-HMI kanye nokusekelwa kohlelo lokuqapha lwe-APP kumqapha okuku-inthanethi nokude.
Umoya ocindezelweyo uhlanzwa ngesomisi somoya bese uhlunga kufinyelela ezingeni elithile ukuze i-generator eyinhloko isebenze nayo. I-air buffer ifakwa ukunikezwa okushelelayo komoya ocindezelweyo ukuze kuncishiswe ukwehla komthombo womoya ocindezelweyo. I-generator ikhiqiza umoya-mpilo nobuchwepheshe be-PSA (pressure swing adsorption), okuyindlela yesikhathi efakazelwe yokukhiqiza umoya-mpilo. U-oksijeni wobumsulwa obufunwayo ku-93% ± 3% ulethwa ethangini le-oxygen buffer ukuze kutholakale kahle igesi yomkhiqizo. I-oksijeni ethangi le-buffer igcinwa ekucindezelweni kwe-4bar. Nge-booster oksijini, i-oxygen yezokwelapha ingagcwalisa amasilinda anengcindezi engu-150bar.
Inqubo Yokugeleza Incazelo emfushane
Isitshalo se-PSA oxygen generator sakhiwe kusetshenziswa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe be-Pressure Swing Adsorption. Njengoba kwaziwa kahle, i-oxygen yakha cishe i-20-21% yomoya osemkhathini. Umkhiqizi we-PSA oxygen usebenzise ama-sieve wamangqamuzana kaZeolite ukwehlukanisa umoya-mpilo emoyeni. I-oksijeni enokuhlanzeka okuphezulu ilethwa kanti i-nitrogen efakwe izingosi zamangqamuzana ibuyiselwa emuva emoyeni ngepayipi lokukhipha.
Inqubo ye-Pressure swing adsorption (PSA) yakhiwa ngemikhumbi emibili egcwele ama-sieve wamangqamuzana kanye ne-alumina esebenzayo Umoya ocindezelweyo udluliselwa emkhunjini owodwa ngama-30 degrees C bese umoya-mpilo ukhiqizwa njengegesi yomkhiqizo. I-nitrogen ikhishwa njengegesi yokukhipha ibuyele emkhathini. Lapho umbhede we-sieve umbhede ugcwele, inqubo ishintshelwa komunye umbhede ngama-valve othomathikhi wokukhiqizwa komoya-mpilo. Kwenziwa ngenkathi kuvunyelwa umbhede ogcwele ukuthi uphinde uvuselelwe ngokudangala nokuhlanza ingcindezi yasemkhathini. Imikhumbi emibili iqhubeka isebenza ngokushintshana ekukhiqizweni komoya-mpilo nasekuvuseleleni okuvumela umoya-mpilo ukuthi utholakale kule nqubo.
Izicelo ze-PSA Plants
Izitshalo zethu ze-PSA oxygen generator zisetshenziswa ezimbonini eziningi ezibandakanya:
Izimboni zePhepha nePulp zokukhishwa kwe-Oxy kanye nokwakhiwa kabusha
Izimboni ze-Glass zokunothisa isithando somlilo
Izimboni ze-Metallurgical zokucebisa oksijini ngamathambo
Izimboni zamakhemikhali zokuphendula kwe-oxidation kanye nezokushisa
Ukuphathwa kwamanzi namanzi angcolile
Welding igesi yensimbi, ukusika nokubopha
Langaphambilini Industrial High Lokuhlushwa Psa Oxygen Generator PSA Oxygen Plant
Olandelayo: I-Industrial Scale PSA Oxygen Concentrator Oxygen Production Plant enezitifiketi
I-Psa Nitrogen Generator
Izinsiza kusebenza zePsa Nitrogen Generator
Industrial High Lokuhlushwa Psa Oxygen Genera ...
Incazelo Umphumela (Nm³ / h) Ukusetshenziswa kwegesi okusebenzayo (Nm³ / h) uhlelo lokuhlanza umoya ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 I-ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 PSA oxygen generator plant yakhiwe kusetshenziswa i-Pressure Swing ethuthukile Ubuchwepheshe be-Adsorption. Njengoba kunjalo kahle k ...
Industrial PSA nitrogen odala isitshalo s ...
Umkhiqizi Purity High Nitrogen Izinsiza kusebenza PS ...
Cryogenic usayizi medium liquid oksijini igesi isitshalo L ...